Air Chucks Factory, ababoneleli |China Air Chucks Abavelisi
Tshixa kwiTire Air Chuck
● I-Revers angle dual head lock-on air chuck ilingana nevili lemoto eliqhelekileyo elineevalvu zeSchrader kwaye inokufakwa ukugcwalisa iindidi zamatayara, kuquka imoto, iveni, ibhasi, ukukhwela, iteletele, ilori kunye nesithuthi esinzima.
● I-engile yokutyhala i-chuck ineendawo ezi-2 zoqhagamshelwano: intloko ethe tye yenzelwe ngokukodwa iivalvu zangaphakathi/zevili elinye elinesiqu esingaphandle, kunye ne-30 degree reverse head kumavili angaphandle anesiqu sevalve ngaphakathi.Ngoko inokufikelela kwiivalvu ekunzima ukufikelela kuzo.
● I-engile air chuck inokhetho lohlobo lokuqukuqela oluvaliweyo okanye oluvulekileyo.Uhlobo oluvaliweyo lwakhiwe ngevalvu yokuvala eyakhelweyo ukuze ibambe umoya de icinezelwe kwisiqu sevalvu.Oku kufuneka kusetyenziswe iicompressors zomoya okanye iinkqubo zokubonelela ngomoya ngaphandle kwevalve phakathi komthombo womoya kunye nechuck yetayara.Xa isetyenziswa njengencam yokwenyuka kwethayara okanye igeyiji yokulinganisa itayara, kufuneka ibe yi-air chuck evulekileyo ukuze i-inflation okanye igeyiji yakho ingaphuki.
● Intloko ezimbini zenziwe nge-alloy ye-zinc, kunye nentsimbi yentsimbi ene-chrome plated enika ukuxhathisa okungcono kwe-corrosion.
● I-6 intshi / 150mm ubude besiqu kunye nomzimba we-chuck wentloko ezimbini uqatywe nge-polyurethane ukuze ungabi nomhlwa kwaye kukunceda ukuba ufikelele kumavili angaphakathi ngelixa ugcina izandla zakho zicocekile.
● Uxinzelelo oluphezulu lwe-150 pounds nge-intshi yesikwere
● I-inlet ifaka i-1/4" intambo yowesifazane we-NPT ene-5/8" okanye i-terminal ye-16mm ye-hexagon, ehambelana nawo nawuphi na umthombo womoya kunye neeadaptha zemisonto eyindoda.
● Intloko ethe nkqo neyeengile engasemva inokutshixa kumsonto wevalvu yamavili.
● I-Boll foot chuck yenzelwe ukukhwela ngokuthe ngqo kwi-Schrader valve stem, efana nevalve yetayara, itanki yomoya.
● I-ball foot chuck yakhiwe ngevalve eyakhelweyo yokuvala ukumisa ukuphuma komoya xa i-chuck ingasetyenziswa, kwaye umoya uhamba kuphela xa iyunithi idibene nesikhondo sevalvu.
● I-Hose barb ifanele i-1/4″ yombhobho wedayamitha yangaphakathi.
● I-Boll foot chuck ine-Zinc alloy body ene-chrome plated, enika ukuqina ngakumbi, ukuxhathisa ukudleka kunye nokungagugi.Ikepusi yobhedu kunye nevalve iyenza yomelele ngakumbi nokuba kukho ukufuma kumoya oxinanisiweyo.
● Ubuninzi boxinzelelo lomoya lwe-150 pounds nge-intshi yesikwere okanye i-10 Bar.
● Uhlobo oluvulekileyo lwegeyiji ye-inflator lukwakhona.Uhlobo oluvaliweyo lolomgca womoya kuphela.
● Ubuncinci be-oda: 2,000pcs.
Iintloko ezimbini zeTire Chuck
● Ichuck yesondo lentloko ephindwe kabini yenziwe nge-zinc alloy kunye nobhedu.Kwaye ukutyhala-tsala intloko ezimbini yenzelwe ngokukodwa iivalvu ezinzima-to-touch xa ivalve ijonge ngaphakathi.
● Le chuck yevili lentloko ephindwe kabini iyafumaneka kuzo zombini iiflowu ezivaliweyo kunye nokuhamba okuvulekileyo.Uhlobo oluvaliweyo lwenzelwe ivalve eyakhelwe-ngaphakathi yokuvala umgca womoya, oya kuvala ukuhamba komoya kunye nokuhamba komoya kuphela i-chuck ehlangene ne-valve yevili.Uhlobo lokuhamba oluvulekileyo lwenzelwe ukulinganisa i-inflator yesondo okanye impompo yomoya.
● I-chuck ye-double head tire chuck ine-1/4″ i-NPT yabasetyhini okanye i-BSP inlet ene-5/8″ / 16mm i-hex connector, iyahambelana ne-air hose eninzi, i-inflator yetayara kunye nezixhobo zokucinezela umoya.
● 6 "/ 150mm ubude besiqu esine-chrome-plated, engenanto kwaye ikuvumela ukuba ufikelele kumavili angaphakathi ngaphandle kokungcola kwezandla zakho.
● Ukusetyenziswa ngokubanzi kwevalve yeSchrader yemoto, ilori, ibhasi, itrektara kunye nesithuthi esikhulu njl.njl.
Iintloko ezimbini eziNqobileyo zeeNyawo zoMoya uChuck
● Intloko ezimbini zenziwe nge-zinc alloy, kunye nentloko ethe tye ye-push-pull air chuck yenzelwe ngokukodwa ivili elingaphakathi / elinye okanye i-valve enzima ukuyibamba, kunye ne-30 ° intloko ebuyela emuva kumavili angaphandle.
● Le chuck ye-air chuck yentloko edibeneyo yentloko emibini iyafumaneka kuzo zombini ukuhamba okuvaliweyo kunye nokuvula okuvulekileyo.Uhlobo oluvaliweyo lwenzelwe i-valve eyakhelwe-ngaphakathi yokuvala umgca womoya.Umoya udlula kuphela xa i-air chuck ibambene nesikhondo sevalve yetayara.Uhlobo lokuhamba oluvulekileyo lwenzelwe ukulinganisa i-inflator yesondo okanye impompo yomoya.
● I-double head straight foot foot chuck features 1/4″ female NPT or BSP inlet ene 5/8″ / 16mm hex connector, ehambelana nethumbu lomoya elininzi, i-inflator yetayara kunye nezixhobo zokucinezela umoya.
● Zombini iziphelo zeentloko ezimbini ezithe tye unyawo lwenyawo emoyeni zitshixa kumsonto wevalufa.
● Uxinzelelo oluphezulu lwe-150 pounds nge-intshi yesikwere.
● Faka isicelo semoto, ilori, ibhasi, itrektara kunye nesithuthi esikhulu njl.njl. (enevalve yeSchrader)
Ikliphu yeTire Chuck
● Ikliphu ekwichuck yetayara kukuhamba komoya okuvulekileyo kunye neziqeshana
● Ivumela i-chuck ukuba iqhobosheke ngokulula kwimisonto yevalvu ukunyuswa kwexabiso lexabiso letayara esingenazandla.
● Idizayinelwe nge-1/4 intshi Umsonto wesizwe obhinqileyo, i-3/4 intshi ye-hex
● Ikliphu ekwivili chuck iyahambelana neevalvu ze-schrader, imilomo yokunyuka kwamaxabiso yezithuthi ezininzi, njengemoto, ibhasi, inqwelo erhuqwayo, isithuthuthu kunye nebhayisekile, ilori, iiSUV, ibhayisekile yombane, isithuthuthu, nazo ziyahambelana nejeji yoxinzelelo lwevili kunye necompressor.
● Ukuqukuqela okuvaliweyo kukwakhona
● Izinto eziphathekayo: ikliphu yethu kwi-tare chuck yenziwe ikakhulu ngobhedu oluhlala ixesha elide kwaye lomelele, luyilwe ngokumelana ne-corrosion efanelekileyo kwaye unokuyisebenzisa ixesha elide.
● Uxinzelelo lomoya ophezulu yi-250 psi
● I-hose chuck yomoya ixhotyiswe nge-hose barb ye-1/4" yombhobho wedayamitha yangaphakathi.
● Ubuninzi boxinzelelo lomoya we-air hose chuck yi-150 pounds nge-intshi yesikwere
● Zombini ukuhamba okuvulekileyo kunye nokuvala / ukutywina uhlobo lwe-air chuck ekhoyo
● Ilungele ukusetyenziswa kwiigeyiji ze-inflator okanye umgca womoya
● I-hose chuck yomoya iyilwe kwaye yenziwe ngokwemigangatho echanekileyo
● Iyahambelana neevalvu ze-schrader, imilomo yokunyuka kwamaxabiso yezithuthi ezininzi, njengemoto, ibhasi, inqwelo erhuqwayo, isithuthuthu kunye nebhayisekile, ilori, iiSUV, ibhayisekile yombane, isithuthuthu, ikwahambelana nejeji yoxinzelelo lwevili kunye necompressor.
● Izinto eziphathekayo: ubukhulu becala zenziwe ngobhedu oluhlala ixesha elide kwaye lomelele, oluyilwe ngokumelana nokugqwala okulungileyo kwaye ungayisebenzisa ixesha elide.
Ikliphu yeTire Air Chuck
● Ikliphu ekwivili lomoya chuck ifanelekile 1/4″ ithumbu le-ID
● I-CNC yomatshini we-hose barb yomlinganiselo ophezulu ochanekileyo kunye noqhagamshelo olukhuselekileyo kunye nemibhobho yomoya emininzi
● Olona xinzelelo lomoya lwekliphu kwithayara emoyeni chuck yi-150 yeponti nge-intshi nganye
● Uhlobo oluvaliweyo/lokutywina ukuze lusetyenziswe kwicompressor yomoya okanye kumgca womoya.
● Uhlobo oluvulekileyo lukwakhona, kwigeyiji ye-inflator
● Idyokhwe enzima yenziwe ngentsimbi eshinyeneyo, engenasiphako okanye egotywayo xa isetyenziswa yonke imihla.
● I-Boll foot chuck ivumela ukuba ikliphu ngokulula kwimisonto yevalvu yezandla zokunyuka kwamaxabiso evili.
● Izinto eziphathekayo: ikliphu kwivili emoyeni chuck yenziwe ikakhulu ngobhedu oluhlala ixesha elide kwaye lomelele, luyilwe ngokuxhathisa okuhle ku-corrosion kwaye unokuzisebenzisa ixesha elide.
● I-ball foot air chuck inokugxunyekwa ngokuthe ngqo kumbhobho womoya
● Le chuck yomoya yebhola inevalve eyakhelweyo yokuvala ukuvala ukuphuma komoya xa i-chuck ingasetyenziswa.
● Umoya uya kubaleka kuphela ngexesha lokunyuka kwamaxabiso (ukudibana nevalve yamatayara)
● Ifanele i-1/4″ ye-ID yombhobho
● Ubuninzi boxinzelelo lomoya lwe-150 pounds nge-intshi yesikwere
● I-air chuck yebhola iyafumaneka ngohlobo oluvulekileyo lwegeyiji ye-inflator
• I-chuck yentloko ephindwe kabini luhlobo lokuqukuqela oluvulekileyo lweegeyiji zamatayara kunye ne-inflators
• I-chuck yentloko ezimbini zenza ukuba iivalvu zamatayara zifikeleleke lula ngeentloko ezimbini ukuze zifikeleleke lula.
• Kumbini wangaphakathi xa isivalo sijonge ngaphakathi.Ilungile ekufikeleleni kwiilori zeDually kunye nezinye ii-engile ezicela umngeni
• I-air chuck enentloko ezimbini eyakhiwe ngentloko yobhedu eyomeleleyo, eyakhelwe ukumelana negaraji yasekhaya okanye ukusetyenziswa kwevenkile.
• Iqondo eliphezulu loxinzelelo lwe-150 psi
• Ubude bubonke: 8”/ 200mm
• 1/4″ uqhagamshelo lwe-NPT yabasetyhini
Tshixa kwiTire Chuck
• Tshixa kwichuck yetayara ukwenzela urhwebo jikelele kunye nosetyenziso lokuzalisa umoya kwimizi-mveliso.
• Ukutshixa kwichuck yetayara kusebenza njenge coupler ekhawulezayo;ikrazula kuyo nayiphi na ivalve yetayara kwaye ihlale ide ikhululwe-akukho sidingo sokugcina uxinzelelo kwi-chuck ukugcina ukuhamba komoya kuqhubeka
• Isitshixo kwichuck yetayara yenziwe ngolwakhiwo lobhedu, olwakhelwe ukumelana neyona garaji yasekhaya inzima okanye ukusetyenziswa kwevenkile.
• Iqondo eliphezulu loxinzelelo lwe-300 psi